Interviews Archives | Page3of 13 | Popular
မင်းသွေး အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရော လူမှုဘဝအရေးကိစ္စတွေမှာပါ မေ့မရနိုင်တဲ့ အမှတ်တရရှိခဲ့ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ အောက်မေ့သတိရစကားသံတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက် သူတစ်ပါး အပေါ် ဦးစားပေး၊ အနစ်နာခံသူဖြစ်လို့ မိသားစုဝင်တွေကလည်း ပိုလို့အချစ်တိုးရပါတယ်။ သူမကွယ်လွန်ခင်မှာလည်း...
အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သီတင်းကျွတ် အမှတ်တရ
ပရိသတ်တွေအတွက် သီတင်းကျွတ်အမှတ်တရ ဆုတောင်းစကားတွေကိုလည်း အနုပညာရှင်တွေက ပြောကြားပေးထားတာမို့ ဒီအချိန်အခါသမယလေးမှာ အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်...
အကယ်ဒမီများရှင် စည်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ပြောတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးတစ်ဦးအကြောင်း
''ဒီနှစ်က အမေနည်းနည်းကျသွား တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ အသက်ကြီးတော့ ဇရာဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ မလွန်ဆန်နိုင် ဘူးလေ။ ရောဂါဆိုတာလည်းရှိလာတာပဲ။ ၈၄ နှစ်ထဲရောက်လာတော့ အမေလည်း ချူချာလာတာပေါ့။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းတာတို့၊ ပြီးတော့...
ဆွေမျိုးမတော်စပ်ပေမယ့် အောင်မြင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းသွေး ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးရုံပဲရှိပါတယ်။ သူသရုပ်ဆောင်တာ သဘောကျတယ်။ လူငယ်မင်းသားတွေထဲမှာ အပြစ်ပြောတဲ့ အသံသိပ်မထွက်တဲ့သူမို့ သဘောကျတယ်။ သူ ဆုံးပါးတာ တအားစောလွန်းပါတယ်....
သရုပ်ဆောင် တေးသံရှင် မင်းသွေးက ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မတိုင်ခင် ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ မင်းသွေးအတွက် အနုပညာရှင်တွေလည်း နှမြောတသစွာနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ မင်းသွေးအတွက် အနုပညာလောကသားတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစကားသံတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်....
ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့ ပြည်တွင်းငွေလဲနှုန်းအခြေအနေတွေကြောင့် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေက တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပထမဆုံးသားကောင်ဖြစ်သွားရသူတွေကတော့ နေ့စဉ်စက်သုံးဆီထည့်ပြီး ဝင်ငွေရှာနေရတဲ့ အငှားယာဉ်မောင်းတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့က တက္ကစီယာဉ်မောင်းအချို့နဲ့ ကားမောင်းနေသူ အချို့ကို သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်း မေးမြန်းပြီး...
အနုပညာရှင်တွေဆိုတာကတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတခြားသူတွေထက်ပိုမိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိသလို မချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတာမို့ဝေဖန်မှုတွေကြုံရစမြဲဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအွန်လိုင်းမှာဆိုးဆိုးရွားရွားဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးအထိရှိတတ်တာပါဒီလိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ...
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲခေတ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်များရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံများ
ပရိသတ်တွေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အားပေးကြတဲ့ မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကို ဘယ်လိုပြောသလဲ။ တကယ်ကောရုပ်သံခေတ်ကို ရောက်ပြီလားဆိုတာ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် . . .
ခေတ်စားလာတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေအပေါ် ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ဘယ်လိုမြင်လဲ . . .
''ရုပ်ရှင် Industry Limited ဖြစ်နေတယ်လေ။ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရုံ တွေကလည်း Limitedဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွေက တင်စ ရာအများကြီးရှိတယ်။ ရုံမရှိလို့ မတင် ရတာပါ။ မနှစ်ကလက်ကျန်ကားတွေ ကနေကျန်လာခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ကပဲ၂ဝဝလောက်ရှိတယ်။ ဒီနှစ်၆လ ပိုင်းအထိကို...